मोबाइलले यसरी आफ्नो मान्छेबाटपनि टाडा बनाउँछ,अनि सुरू हुन्छ झगडा(एकपल्ट अवस्य पढेर सेयर गर्नुहोस यो ज्ञानवर्धक जानकारी) | सुदुरपश्चिम खबर
On मोबाइलले यसरी आफ्नो मान्छेबाटपनि टाडा बनाउँछ,अनि सुरू हुन्छ झगडा(एकपल्ट अवस्य पढेर सेयर गर्नुहोस यो ज्ञानवर्धक जानकारी)
यद्यपि यो उपयोगी हुँदाहुँदै पनि यसका कतिपय नकारात्मक पाटो छ । यसको अर्थ मोवाइल आफैमा खराब बस्तु भने होइन । तर, यसको प्रयोगमा गरिने कतिपय असावधानी वा यसप्रतिको बढी नै आशक्ति अहिले धेरैको निम्ति समस्या बन्दै गइरहेको छ । खासगरी दाम्पतीका लागि ।नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘बाँदरलाई भर्‍याङ’ । अर्को यस्तै उखान छ, ‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रासँगै खायो ।’ यसको अर्थ कुनैपनि बस्तुको उपयोगितालाई बुझ्नुभन्दा त्यसको दुरुपयोग गर्नु ।
अतः मोबाइलको कारण किन दाम्पत्य जीवनमा खटपट आउँदैछ त ?मोवाइल अहिले शंका पैदा गर्ने माध्याम बनेको छ । शंकाले सम्बन्धलाई सधै धरापमा राख्छ । दम्पतीवीच शंका पैदा हुने, मनमुटाव हुने, झै-झगडा हुने निहुँ मोवाइलबाटै सुरु भएको पाइन्छ, धेरैजसो अवस्थामा ।
यो त भए एकअर्काप्रति गर्ने शंका । मोवाइलले दम्पतीबीच अर्को समस्या पनि थपिदिएको छ, उपेक्षाको ।जब श्रीमान वा श्रीमतीको हातमा मोबाइल हुन्छ, उनीहरु आफ्नै संसारमा मग्न हुन थाल्छन् । फेसबुक चलाउने, टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने, भिडियो हेर्न इत्यादि गतिविधिमा लिप्त हुन्छन् । कतिसम्म भने शयन कक्षमा पुगिसकेपछि पनि उनीहरु मोवाइलमै झुन्डिन्छन् । आपसी संवाद हुँदैन । एउटाले अर्कोलाई पूर्ण बेवास्ता गरिदिन्छ । जब दम्पतीबीच संवाद हुँदैन, अन्तरंग पल पातलिदै जान्छ, उनीहरुको प्रेम फिका हुँदै जान्छ ।
त्यसैगरी मोवाइलमा लिप्त भइरहँदा एकअर्काप्रति आशंका पनि बढ्न थाल्छ । खासगरी फेसबुकले यस्तो आशंका पैदा गरिदिन्छ । फेसबुक पनि अहिले दम्पतीबीच कलहको बिउँ बन्दैछ ।सबै दम्पतीको स्वभाव र रुची पनि एकनास हुँदैन । कोही गीत सुन्न रुचाउँछन्, फिल्म हेर्न रुचाउँछन् । कसैलाई भने यी सबै कुरामा रुची हुँदैन । श्रीमान् र श्रीमतीबीच यस किसिमको बिजातिय स्वभाव छ भने यसले झगडा निम्त्याउँछ । अरु बेला त यसले खास फरक पार्दैन । तर, जब दम्पती शयन कक्षमा हुन्छन्, त्यसबेला एउटा पार्टनर गीत सुन्न, भिडियो हेर्न थालेमा अर्कोलाई बाधा पुग्छ । यसरी मोबाइलकै कारण विपरित रुची प्रकट हुने हुँदा उनीहरुबीच भनाभन सुरु हुन्छ ।खासमा मोवाइल अति उपयोगी उपकरण हो । यद्यपि यसको प्रयोगमा केही सीमा र सर्तहरु पालना गर्नुपर्छ, खासगरी दम्पतीले । नभए यो झगडाको निहुँ बन्न सक्छ ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको स्वास्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् ।साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला ।तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ
यी उपाय अपनाउनुहोस्श ,सरीरका अनावश्यक रौँ हटाउन मन छ भने ?
शरीरमा अनावश्यक रौं आएर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने चिन्ता नलिनुस्, ब्यूटीसियन नीरु श्रेष्ठले घरमै अनावश्यक रौं हटाउने केही उपाय दिएकी छिन् ।...
एजेन्सी – जब सम्पूर्ण भोजनको कुरा हुन्छ, तब यसमा दूधको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दूधलाई तपाई शुद्ध रुपमा वा बेसार र अन्य कुराहरु मिसाएर पनि...
पुरूषलाई मन पर्दैनन् महिलाका यस्ता बानी
महिलाहरुले खित्का छाडेर हाँसेको पुरुषले मन पाराउँदैनन् । कुनैपनि महिलाले जव आफूले गरेका गल्ती लुकाउन हाँसेर टार्ने प्रयास गर्छन भने त्यो बेला पुरुषहरुलाई रिस...
केही सडकमा छन् त केही दरबारमा : धर्मानन्द भट्ट
केही सडकमा छन् त केही दरबारमा छन्। अनेकथरी मान्छेहरू त यसै बजारमा छन्। युद्ध लडेकाहरू बिचरा खै कहाँ छन कहाँ, चैतेहरू बसेर महलमा चढेका कारमा छन्। आनन्द छ...